HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Népali Pangasinan Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Tsy tianay ankizivavy ny fiovana eo amin’ny vatana. Mampijaly ilay izy, maharikoriko, ary mampiady saina. Ratsy daholo ny ankamaroany.”—Oksana.
“Vetivety eo aho faly, dia avy eo aho malahelo. Tsy haiko raha zavatra ara-dalàna izany ho an’ny ankizilahy, fa izany aloha no nahazo ahy.”—Brian.
“Androany ianao mitomany dia rahampitso ianao tsy maninona. Tampotampoka eo ianao tezitra dia tampotampoka eo kivy ary lasa miafina ao amin’ny efitranonao.”—Oksana.
“Akanjo malalaka be no nanaovako tamin’izaho vao nanomboka nitombo, dia niondrikondrika aho rehefa nandeha. Tsy nahazo aina aho sady menatra na dia efa fantatro aza hoe naninona ny vatako no niova. Hafahafa tamiko ilay izy.”—Janice.
“Lasa tsy nieritreritra intsony aho hoe mahasosotra daholo ny ankizilahy. Hitako izao hoe misy bôgôsy ihany ry zareo ary tsy ratsy ny hoe raiki-pitia. Lasa nahafinaritra mihitsy aza ny niresaka hoe i ‘Anona tara amin’i Anona.’”—Alexis.
“Nataoko izay hitovizana tamin’ny ankizilahy hafa, dia lasa tara tamin-dry zareo aho. Efa ela be tatỳ aoriana aho vao lasa tia ankizivavy. Tantara efa mivalona izao ilay izaho tia ankizilahy taloha.”—Alan.